Madaxweynaha cusub ee Puntand oo xafiiska la wareegay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha cusub ee Puntand oo xafiiska la wareegay
January 14, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha cusub iyo madaxweynihii hore intii lagu guda jiray munaasabada xil-wareejinta oo maanta oo Isniin ah dhacday. [Isha Sawirka: Facebook/ShareecoYasinShareeco]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa maanta oo Isniin ah si rasmi ah xafiiska u la wareegay, asbuuc kadib markii uu ku guuleystay doorashada madaxweynaha.
Munaasabada xil-wareejinta madaxweynaha oo ka dhacday aqalka madaxtooyada ayaa waxaa kasoo qeybgalay masuuliyiinta dowladda oo ay ku jiraan saraakiisha ciidamada, iyo sidoo kale oyadaasha dhaqanka.
Hadal kooban oo munaasabada uu ka jeediyay madaxweynaha cusub ayaa sheegay in ay shaqada sii wadi doonaan gaarsiina doonaan meel ka fiican halka maanta ay joogto.
Dhankiisa, madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa masuuliyiinta dowladda iyo shacabka ka codsaday in ay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub.
Bishii Janaayo 8-deedii ayaa baarlamaanka Puntland Siciid Cabdullahi Deni u doorteen madaxweynaha Puntland ee shant sanno soo socota.
Madaxweynaha cusub ayaa golihiisa wasiiradda ku soo dhisi doona muddo 21 cisho ah, sida uu qabo dastuurka dowladda Puntland.
Baarlamaanka maamulka Galmudug oo xilkii ka qaaday Madaxweyne Cabdikariim Guuleed
Cadaado-(Puntland Mirror) Xildhibaanada maamulka Galmudug ayaa maanta oo Talaado ah xilkii ka qaaday Madaxweyne Cabdikariim Xuseen Guuleed, iyaga oo ku eedeeyay wax-qabad la’aan. Tiro 54 xildhibaan ah ayaa u codeeyay in xilka laga qaado Madaxweyne [...]
Puntland forces preparing offensive against Al-Shabab militants in Galgala Mountains, Security Minister says
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland forces are preparing an offensive against Al-Shabab militants after it attacked on army base in Galgala Mountains earlier Thursday. Speaking to local media in Garowe, Puntland’s Minister of Security Abdi Hersi Ali [...]
Dakar-(Puntland Mirror) Adama Barrow, ninka ku guuleystay doorashada lagu murmay ee dalka Gambia, ayaa loo caleemo-saaray madaxweyne. Waxaa lagu dhaariyay safaarada uu dalkiisu ku leeyahay dalka Senegal, isaga oo amray askarta Gambia in ay [...]